Izindaba - Yini Oyaziyo Nge-Mineral Fibord Board?
Wazi ini ngamaminerali Fiber Board?
Ibhodi yoboya yamaminerali izofakwa emaphethini ehlukene ngesikhathi sokukhiqiza, esilungele ukusetshenziswa ezindaweni ezihlukile. Ingaphezulu lejwayelekile lebhodi yamaminerali linezimbobo zezimbila, izimbobo ezinkulu nezincane, izikhonkwane eziphakeme kakhulu, ukuqhuma kwesihlabathi nokwelashwa kwefilimu. Futhi singenza imidwebo yobuciko engaphezulu, efana ne-strip groove board, i-checkerboard, i-corrugated board, njll. Ibhodi elithatha umsindo alinazo izinto eziyingozi emzimbeni womuntu, futhi isakhiwo saso esikhulu kakhulu singathola amagesi ayingozi emzimbeni umoya futhi ukhulule ama-molecule amanzi, ngakho-ke kungahlanza umoya futhi kulungise umswakama womoya ongaphakathi.
Amandla wokubonakalisa aqinile woya wamaminerali angathuthukisa ngempumelelo ukukhanya kwangaphakathi, alondoloze iso futhi aqede ukukhathala. Ukuphakama okuphezulu kunganciphisa ngokungaqondile izindleko zokusetshenziswa kwamandla, kuze kufinyelele ku-18% 25% uvolo wamaminerali omuhle kakhulu wokufudumeza, ukusebenza kwe-insulation kungandisa ukuncishiswa kwezindleko zokupholisa nokushisa, kuze kufinyelele ku-30% 45% wezindleko. Izinto ezingavuthiwe ezisetshenziswayo zebhodi yamaminerali efaka umsindo u-mineral fiber, ezinobunzima obuphakathi kuka-200 - 300Kg / m3, ngakho-ke inothile ngokusebenzisa ama-micropores, angakwazi ukumunca ngempumelelo amaza omsindo futhi anciphise ukubonakaliswa kwamagagasi omsindo, ngaleyo ndlela ukuthuthukisa ikhwalithi yangaphakathi yangaphakathi nokunciphisa umsindo.
Ukuze ufake ibhodi yoboya yamaminerali, izindlela ezahlukahlukene kufanele zenziwe emakhoneni ebhodi ukufanisa nohlelo lokumiswa kophahla. Ngakho-ke, imiphetho ingaba ngumaphethelo wesikwele, umphetho we-tegular, onqenqemeni lwe-beveled, onqenqema olufihliwe noma onqenqemeni lomkhumbi.
Ubukhulu bungaba yi-14mm kuya ku-20mm ngokusho kwezidingo ezihlukile. Ukucaciswa okujwayelekile yi-595x595mm, i-600 × 600mm, 603x603mm, 605x605mm, 625x625mm, 595x1195mm, 600 × 1200mm, 603x1212mm, njll.
Ngenkathi kwakhiwa ibhodi yoboya yamaminerali, igumbi kufanele livalwe ukuvimbela ukungena komoya omswakama ukuze kubangele ukuba ibhodi yoboya yamaminerali icwile;
Ngesikhathi senqubo yokufaka, abasebenzi kufanele bagqoke amagilavu ​​ahlanzekile ukugcina indawo yebhodi ihlanzekile.
Ibhodi yoboya yamaminerali inemisebenzi emihle kakhulu njengokufaka umsindo, ukungahambisani, ukufakwa kokushisa, umhlobiso omuhle, njll. Kusetshenziswa kabanzi ezindongeni ezihlukene zokwakha umhlobiso ongaphakathi odongeni obekwe ngaphakathi; njengamahhotela, izindawo zokudlela, izindawo zemidlalo yaseshashalazini, izitolo ezinkulu zezitolo, izikhala zehhovisi, iziteshi zokufunda, ama-studio, amakamelo ekhompyutha kanye nezakhiwo zezimboni.